Inona no atao hoe jaundice mainty ary ahoana no hisorohana izany? – Noor Health Life
Inona no atao hoe jaundice mainty ary ahoana no hisorohana izany?
Ny hepatita C, fantatra ihany koa amin’ny hoe hepatita C, dia aretina amin’ny atiny izay mety hiteraka fahasimban’ny atiny. Ny viriosy hepatita C na HCV no mahatonga azy io.
Ny jaundice na ny aretina hepatita C dia mety ho mafy (fohy) na mitaiza (miaritra). Rehefa voan’ny hepatita mafy ny olona iray dia mety haharitra hatramin’ny 6 volana ny soritr’aretina.
Ny otrikaretina mafy dia lasa mitaiza raha tsy afaka manala ilay viriosy ny vatana. Ara-dalàna izany – ny aretina mafy dia lasa mitaiza amin’ny 50% amin’ny tranga.
Fanaraha-maso sy fisorohana ny aretina Araka ny voalazan’ny Noor Health Life, ny ankamaroan’ny tranga vaovao amin’ny hepatita C amin’izao fotoana izao dia vokatry ny fifandraisana amin’ny fanjaitra na fitaovana hafa ampiasaina hanamboarana na tsindrona fanafody. Matetika izany dia noho ny fampiasana fanjaitra na fifandraisana tsy nahy amin’ny toeram-pitsaboana.
Inona avy ireo soritr’aretin’ny jaundice?
Ahoana no ahazoanao jaundice mainty?
Tsy afaka mahazo jaundice mainty ianao amin’ny fomba rehetra
Ny soritr’aretin’ny jaundice mainty mafy
Diagnose ny jaundice
Rahoviana ianao no tokony hijery dokotera?
Ny ankamaroan’ny olona dia tsy manana soritr’aretin’ny hepatita C na jaundice mainty. Saingy eo anelanelan’ny 2 herinandro sy 6 volana aorian’ny fidiran’ny viriosy ao amin’ny lalan-drànao dia hitanao:
Fako miloko tany
Ny urine mainty
Tonon-taolana (toe-javatra mahatonga ny maso sy ny hoditra mavomavo ary ny urine mainty)
Very ny fahazotoan-komana
Matetika maharitra 2 ka hatramin’ny 12 herinandro ny soritr’aretina
Miparitaka ny jaundice mainty rehefa miditra ao amin’ny lalan-drànao amin’ny alalan’ny fifandraisana amin’ny olona voan’ny hepatita C ny rà na ny fluidin’ny vatana voan’ny viriosy hepatita C.
: Mety ho voan’ny virus ianao amin’ireto fomba manaraka ireto
Mampiasa fanafody tsindrona sy fanjaitra mitovy
Ny fanaovana firaisana ara-nofo, indrindra raha voan’ny VIH ianao
Fahaterahana – ny reny dia afaka mampita izany amin’ny zanany
Kaikitry ny moka
Mampiasa lovia sakafo iray ihany
Flatulence na fivontosan’ny tongotra sy tongotra
Tsy mandeha koa ny atidohanao (encephalopathie)
Mandeha rà sy mangana mora
Fahasahiranana amin’ny fitadidiana sy ny fifantohana
Ny lalan-dra toy ny tranon-kala amin’ny hoditra
Fandatsahan-drà ao amin’ny lalankanina ambany noho ny fandehanan-dra (varian’ny esophageal)
Satria matetika tsy misy soritr’aretina ny otrikaretina HCV vaovao, vitsy dia vitsy ny olona voan’ny aretina rehefa vaovao ilay aretina. Amin’ireo izay voan’ny aretina HCV mitaiza, dia matetika tsy fantatra ny aretina satria mijanona ho tsy misy soritr’aretina mandritra ny fotoana maharitra aorian’ny otrikaretina, na dia ny soritr’aretina faharoa noho ny fahasimban’ny atiny aza.
Ny otrikaretina HCV dia hita amin’ny dingana 2.
1. Ny fitiliana antikora miady amin’ny HCV miaraka amin’ny fitiliana serolojika dia mamaritra ny olona voan’ny virus.
2. Raha tsara ny fitsapana amin’ny antibody manohitra ny HCV, dia ilaina ny fitiliana asidra nokleika ho an’ny HCV ribonucleic acid (RNA) mba hanamarinana ny aretina mitaiza, satria manodidina ny 30% amin’ny olona voan’ny HCV no tsy mandeha. ny aretina. Na dia tsy voan’ny aretina intsony aza ireo olona ireo, dia mbola haneho fitsapana tsara ho an’ny antibody manohitra ny HCV izy ireo.
Raha vantany vao fantatra fa voan’ny aretina HCV mitaiza ny olona iray, dia tokony hatao ny famerenana mba hamaritana ny haavon’ny fahasimban’ny aty (fibrose sy cirrhose). Izany dia azo atao amin’ny alalan’ny biopsy aty na karazana fitsapana tsy invasive. Ny haavon’ny fahasimban’ny atiny dia ampiasaina hitarihana ny fanapahan-kevitra momba ny fitsaboana sy ny fitantanana ny aretina.
Ny fitiliana aloha dia afaka misoroka ny olana ara-pahasalamana mety ateraky ny aretina ary misoroka ny fifindran’ny viriosy. Ny OMS dia manoro hevitra ny hanao fitiliana ireo olona atahorana ho voan’ny aretina.
Ny otrikaretina vaovao miaraka amin’ny HCV dia tsy mitaky fitsaboana foana, satria amin’ny olona sasany dia hanala ny otrikaretina ny valin’ny hery fiarovana. Na izany aza, rehefa lasa mitaiza ny otrikaretina HCV dia ilaina ny fitsaboana. Ny tanjona amin’ny fitsaboana ny jaundice dia ny fanasitranana ny aretina.
Ny OMS dia manoro ny fitsaboana amin’ny Pan Genotypic Direct Acting Antiviral (DAA) ho an’ny olona mihoatra ny 12 taona. Ny DAAH dia afaka mitsabo ny ankamaroan’ny olona voan’ny HCV, ary fohy ny faharetan’ny fitsaboana (matetika 12 ka hatramin’ny 24 herinandro), arakaraka ny tsy fisian’ny cirrhose na ny fisian’ny cirrhose.
Ny DAA pan-genotype dia lafo kokoa any amin’ny firenena avo sy antonony. Na izany aza, ny fampidirana ireo dikan-teny jeneraly amin’ireo zava-mahadomelina ireo dia nitarika ny fihenan’ny vidin’ny vidiny any amin’ny firenena maro (indrindra amin’ny firenena ambany fidiram-bola sy ambany fidiram-bola).
Mihatsara ny fidirana amin’ny fitsaboana HCV saingy voafetra be. Amin’ireo olona 58 tapitrisa miaina miaraka amin’ny otrikaretina HCV maneran-tany tamin’ny taona 2019, dia tombanana ho 21% (15.2 tapitrisa) no nahalala ny aretina, ary amin’ireo voan’ny aretina mitaiza HCV Tamin’ny faran’ny taona 2019, manodidina ny 62% (9.4 tapitrisa) no voan’ny aretina. tsaboina amin’ny DAA.
Tsy misy vaksiny mahomby amin’ny hepatita C, noho izany dia miankina amin’ny fikarakarana ara-pahasalamana sy ny fampihenana ny mety hisian’ny viriosy amin’ny mponina atahorana ny fisorohana. Anisan’izany ny olona manindrona rongony sy lehilahy manao firaisana amin’ny lehilahy, indrindra fa ireo mitondra ny tsimokaretina VIH na manao fisorohana mialoha ny fihanaky ny tsimokaretina VIH.
: Ahitana fepetra fisorohana
Ny fampiasana tsindrona ara-pahasalamana azo antoka sy araka ny tokony ho izy
Fikarakarana sy fanariana zava-maranitra sy fako azo antoka
Manome tolotra fisorohana feno ho an’ireo izay manindrona zava-mahadomelina
Fanomezana ra ho an’ny HCV sy HBV
Fanofanana mpiasan’ny fahasalamana sy
Fisorohana ny fandehanan-dra mandritra ny firaisana ara-nofo
Raha misy soritr’aretin’ny jaundice mainty ianao na heverinao fa voan’ny virus dia manaova fotoana hanaovana fitiliana.Ny antony sy ny fitsaboana ny jaundice amin’ny olon-dehibe
Ny jaundice amin’ny olon-dehibe na antsoina koa hoe jaundice na jaundice dia aretina fahita amin’ny zaza vao teraka saingy mety hisy fiantraikany amin’ny olona na firy taona. Zava-dehibe ny manatona dokotera avy hatrany raha misy soritr’aretin’ny jaundice. Amin’ny olon-dehibe, ny jaundice dia mety ho famantarana ny olana amin’ny atiny, ra na ravina.
Ny antony mahatonga ny jaundice amin’ny olon-dehibe
Ny jaundice dia mitranga rehefa mitombo ny isan’ny saka rubin. Cat rubin dia singa mavo hatramin’ny volomboasary ao amin’ny ra izay hita ao amin’ny sela mena. Rehefa maty ireo sela ireo dia sivanin’ny aty amin’ny alalan’ny ra. Fa raha misy kilema mipoitra ao amin’io rafitra io, dia tsy mandeha tsara ny atiny ary manomboka miforona betsaka ny fako saka ka mahatonga ny hoditra ho mavo.
Ny jaundice dia tsy fahita firy amin’ny olon-dehibe toy ny amin’ny ankizy, saingy mety hisy antony maro. Ny antsipirian’ny sasany amin’izy ireo dia toy izao manaraka izao:
* Hepatite: Mazàna io aretina io dia vokatry ny viriosy, ary mety ho fohy na maharitra mihitsy aza. Izany hoe mety haharitra enim-bolana izany. Ny fampiasana fanafody sasany sy ny fikorontanan’ny rafi-kery fanefitra dia mety hiteraka hepatita, rehefa mandeha ny fotoana dia mety hanimba ny atiny aloha ny hepatita ary miteraka hepatita.
* Tsentsina ny fantson-drano: Lakandrano tery izy ireo izay misy ranon-javatra atao hoe bile. Ireo lakandrano ireo dia mitondra bile avy amin’ny aty sy ravina mankany amin’ny tsina kely. Indraindray ireo vatosoa ireo dia voasakan’ny aretin’ny atiny. Raha izany no izy, dia mety hiteraka jaundice izy ireo.
* Kanseran’ny pancreatic: Io no homamiadana fahafolo mahazatra indrindra amin’ny lehilahy ary fahasivy mahazatra indrindra amin’ny vehivavy. Mety hanakana ny fantson-drano koa izy io, izay mety hiteraka jaundice.
* Fampiasana fanafody sasany: Misy ifandraisany amin’ny aretin’ny atiny ny penicillin, ny pilina fandrindram-piterahana ary ny fampiasana steroid.
Ny soritr’aretin’ny Jaundice
* Mavo mavo ny hoditra sy ny fotsy maso.
* Mandoa na maloiloy
* Lanja lanja
* Maizina ny lokon’ny urine.
Matetika ny dokotera no manao fitiliana saka rubin rehefa miseho ny soritr’aretin’ny jaundice, izay mampiseho ny habetsahan’ny akora ao amin’ny ra. Raha voan’ny jaundice ny marary, dia ho betsaka kokoa ny habetsahan’ny saka rubin ao amin’ny rany. Azon’ny dokotera atao ny manendry fisavana sy fitsapana hafa mba hahafantarana ny momba ny aty aorian’ny fahafantarana ny soritr’aretina. Natao ihany koa ny CBC hamantarana ny antony isaina ny selan-dra.
Fitsaboana ny jaundice
Mba hitsaboana azy dia ilaina ny mahafantatra ny antony sy ny fitsaboana azy. Raha miteraka jaundice ny hepatita dia ho sitrana ho azy ny jaundice raha vao miala ny aretina ary manomboka sitrana ny aty.
Raha toa ka misy sakantsakana ao amin’ny lakandrano ary niteraka jaundice izany dia sokafan’ny dokotera amin’ny fandidiana.Inona no sakafo mahasitrana ny jaundice?
Ny “Jaundice” dia tsara kokoa amin’ny sakafo noho ny fanafody. Ilaina ny fepetra sasany amin’ity aretina ity. Ny marary voan’ny jaundice dia tokony hifady ny ezaka ara-batana rehetra mandritra ny aretina. Mampiasà voankazo sy legioma manta fa tsy sakafo masaka amin’ny sira, dipoavatra ary menaka. Ireto ambany ireto ny sasany amin’ireo voankazo sy anana ary anana izay sakafo ho an’ny marary sy fanafodin’ny aretina ihany koa.
Ny fampiasana ranomandry be loatra dia miteraka areti-maso ao amin’ny aty. Fadio araka izay azo atao, aza mihinana akoho na sakafo mavesatra, misy fiantraikany amin’ny fiasan’ny aty izany, ka anana na ranom-boankazo manta ihany no ampiasaina.
Hetezo kely ny voatavo ary andrahoy mandra-pahavitan’ny taviny. Ampio coriander, komina fotsy, ginger, poivre noir, sira kely ary tongolo gasy. Aza asiana sakay mena na maitso na karazana zava-manitra mafana sy poizina, raha tena noana ianao dia mihinana voatavo ary misotroa ron-kena. Aorian’ny hanoanana mafy mandritra ny roa na telo andro, mihinàna mofo avo roa heny, lafarinina, lentila voanjo ary kobam-bary, na dia amin’ny ampahany kely aza. Ny radish, karaoty, kôkômbra, gourd, zucchini dia azo hanina nandrahoina na manta tsy misy poivre sy zava-manitra mafana. Raha malemy ianao dia tsara kokoa raha mihinana tantely madio miaraka amin’ny sakafo ianao.
Manaova kafe amin’ny alalan’ny fanatsobohana ny antsasaky ny ginger voatetika fennel, iray sotrokely sy folo ravina solila amin`ny rano 250 ml ary misotro iray kaopy, in-telo na in-efatra isan`andro tsy misy siramamy. Afangaro ny ginger vao nototoina antsasaky ny sotrokely, rano iray sotro, ranom-boasarimakirana sy ranom-boasarimakirana mitovy, tantely iray sotrokely. Milelaka in-telo na in-efatra isan’andro.
Manaova jambon’ny karaoty ary mihinana sotro iray isan’andro.Ny fomba fanaovana jam dia maka karaoty tsara kalitao iray kilao, tantely iray kilao ary rano ½ litatra. Hetezo roa ny karaoty dia arotsaka ao anaty rano ary andrahoy amin’ny afo kely.Ao anaty vilany hafa dia asiana rano iray litatra ary ampangotrahina misaraka. Rehefa levona tsara ny karaoty dia apetraka ao anaty siny ary sarony amin’ny sarony. Amin’ny andro faharoa dia hanina ny mitovy amin’ny sotro roa.Rehefa avy nihinana marmelade dia potehina ny fennel iray sotrokely sy ny kardamôma maitso dimy, ampangotrahina amin’ny rano iray kaopy, tatatra ary afangaro amin’ny siramamy kely dia sotroina. Misotroa dite fennel sy cardamom in-telo isan’andro, manasitrana ny aretina.
Fafafazana sira mainty alohan’ny hanina, manala ny hafanana amin’ny vavony sy ny aty. Matetika izy io no ampiasaina amin’ny jaundice.
Ny radish dia legioma mahasoa ho an’ny marary jaundice, mihinana azy manta, manampy amin’ny fandevonan-kanina haingana ny fihinanana jagger miaraka aminy. Misotroa ranom-boankazo nafangaro siramamy, ilaina ihany koa ny raviny. Makà ranom-boankazo iray kilao ary afangaro amin’ny siramamy desi roa sotrokely, sasana ary sotroina iray kaopy isan’andro mandritra ny fito andro.
Malathi, fennel sy kanelina, zavatra telo, telo grama, soak amin`ny antsasaky ny vera rano amin`ny alina, sasao ny maraina. Afangaro ao anaty ranom-boankazo 50 ml ny ranom-boankazo ary sotroina.Ny maraina dia kobanina amin’ny rano toy izany koa ireo entana ireo ary ny hariva dia asio ranom-boankazo ary sotroina.
Kobanina amin’ny vilany tanimanga ny ravin’i Arjuna ny hariva, torotoroy ny maraina, sivana ao anaty vilany madio ary sotroina.Ny maraina dia atsobohy amin’ny rano indray ireo ravina ireo, sotroy ny ranony amin’ny hariva. manasitrana ny aretina.
Maka manga sy vovon-tsavony fito sotrokely afangaro amin’ny tantely ary sotro iray isan’andro maraina sy hariva.
Aorian’ny fanamainana ny voninkazo akasia dia totohohina amin’ny lanja egyptiana.Mihinana enina isan’andro maraina sy hariva mandritra ny herinandro.
Amin’ny alina, kobanina amin’ny rano iray vera ny lafarinina grama eran-tanan’ny tanana dia asivana ny maraina.
Poteho ny ranom-boasary makirana roa na telo ary afangaro amin’ny rano telo mitete. Sotroina alohan’ny hatory. Ny fampiasana azy mandritra ny efatra na dimy andro dia manala ny soritr’aretin’ny jaundice.
Afangaro amin’ny ronono iray kaopy ny menaka clonji antsasany sotrokely ary sotroina alohan’ny hatory amin’ny alina.
Esory ny voatavo, atsipazo ny ronono.
Ny voan’ny fenugreek dia antsoina hoe methra.Atambatra ny methra iray kilao sy ny kardamôma iray kilao. Makà sotro iray maraina sy hariva miaraka amin’ny ronono iray kapoaka.
Amin’ny alina dia maka voan’ampongabendanitra 50 grama eo ho eo ary apetraho ao anaty vilia vy madio izy io, ary ny maraina dia afangaro amin’ny rano ejipsianina ary sotroina, ary avy eo mitoto siramamy eo an-toerana iray kilao sy servieta misy fennel ao anatiny dia ataovy ao anatiny. tavoahangy mifangaro dia tehirizo amin’ny masoandro. Ny tavoahangy dia iray ampahefatry ny tsy misy. Aza avela mandritry ny herinandro fa kobanina foana.
Ny ranom-pary dia manasitrana ny jaundice, ny fampiasana matetika azy dia tsy vitan’ny hoe manala ny aretina fa manala ny fahalemena ara-batana aterak’izany.
Ny akasia dia zavamaniry mamokatra ronono fotsy matevina rehefa tapaka ny raviny na ny rantsany. Apetaho eo amin’ny felatanana havanana izany ronono telo mitete izany ary kosehina amin’ny faladian-tongotra havanana. Rehefa manomboka miraikitra ny ronono dia atsaharo ny mangotraka ary avelao mandritra ny 5 minitra, ary sasao amin’ny rano madio. Manaova toy izany koa amin’ny tanana havia sy tongotra ny ampitso.Ataovy toy izany koa ny tanana sy ny tongotra rehefa kibo foana.Aorian’ny herinandro dia ho afaka ny jaundice mavo sy mainty.
Ronono no zava-pisotro tsara indrindra amin’ity aretina ity. Manampy sira kely, poivre noir voatoto ary voanio komina ao anaty ronono iray vera ary misotro azy indroa isan’andro dia mahasoa.
Asio vovon-tsira sy poivre kely amin’ny ranom-boankazo voatabiha iray vera ary sotroy.Mifandraisa amin’i Noor Health Life raha mila fanontaniana sy valiny fanampiny. Ny mailaka sy ny WhatsApp dia afaka manome fampahalalana momba ny fiainana ara-pahasalamana maivana. noormedlife@gmail.com